ungakuvumela kanjani noma ukukhubaze ukuthayipha kokuswayipha ku-ios 13
none Izindaba Nokubuyekezwa Ungavumela kanjani noma ukhubaze ukuthayipha kwe-swipe ku-iOS 13
Ungavumela kanjani noma ukhubaze ukuthayipha kwe-swipe ku-iOS 13
Hhayi, wazi ngani - ukuthayipha ngokuswayipha manje sekuyinto kuma-iPhones! Yebo, i-Apple yayingakaze ibe nkulu ekushintsheni indlela ikhibhodi yayo eyingqophamlando esebenza ngayo - kuthathe yonke indlela kuze kufike ku-iOS 8 ukuze inkampani ivumele ukufakwa kwamakhibhodi eqembu lesithathu. Futhi noma kunjalo, abasebenzisi abaningi bakhethe ukunamathela ngekhibhodi yangempela ye-iOS ngoba ihlanganiswe kahle futhi ngoba inaleso sikhombisi esisebenziseka kalula.
Yebo, jabula, njengoba kungasadingeki uhlukaniswe phakathi kokuba nokulawulwa kwesikhombisi noma ikhibhodi yohlobo lokuswayipha - ku-iOS 13, i-Apple yethule ukusebenza okubizwa nge- 'Slide to Type'. Ngokuyisisekelo, isebenza njengekhibhodi enhle endala yeSwype kusuka emuva ngo-2013 - uslayida umunwe wakho kwikhibhodi, uqiniseke ukuthi udlula kuzo zonke izinhlamvu obufuna ukuzishaya, futhi i-AI ngomlingo ibala ukuthi yiliphi igama ozama ukulithayipha . Kwenza ukuthayipha ngesandla esisodwa kube lula kakhulu, yingakho le ndlela inabalandeli abaningi.
Isici - i-Apple siyibiza nge- 'Slide to Type' - inikwe amandla ngokuzenzakalela. Uma ubheka ukukhubaza noma ukunika amandla kabusha, nakhu lapho ungathola khona ukuguquguqula:
Iya kuzilungiselelo -> Okuvamile -> Ikhibhodi. Thola i-toggle “Slide to Type” eseduze kwangaphansi bese uyikhanyisela ku-on / off, kuye ngokuncamelayo.
Kuyafaneleka ukuthi iSlide to Type ayisekeli zonke izilimi, okungenani okwamanje. Ngakho-ke, uma ungesona isikhulumi sendabuko sesiNgisi, ungahle ungakwazi ukujabulela isici esisha lapho uxhumana ngolimi lwakho.
thola into ngomkhethi we-css
I-iphone 7 ne-bumper yensimbi
Ungathumela kanjani i-Animoji ku-Facebook Messenger, WhatsApp, i-imeyili, noma yikuphi lapho ufisa khona ...
Ukubuyekezwa kwe-Apple iPhone 7 Plus
Ungayisusa kanjani i-Samsung Galaxy Note 3 ngendlela elula
Izindlela ezi-3 zokudlulisa amafayela kusuka ku-PC yakho aye kwi-iPad (2021)
I-iPad Pro 2021 vs iPad Air 4: Umehluko ongakanani?
I-Google Chrome ithola isici esisha esiwusizo kakhulu ku-Android
Inothi lamahhala 9 elivela eVerizon yisivumelwano esihle kakhulu seBOGO ku-Android
AbakwaSamsung & apos; s Galaxy S6 Active bangafika nesikhala sekhadi le-microSD, kepha ngezindleko eziphezulu
Nasi isithombe se-Samsung Galaxy Note 9 S Pen vs Note 8 S Pen
Ngaphandle kokwamukelwa kwePixel 4 & apos; ukuthengiswa kweGoogle Pixel bekunamandla ngokumangazayo ngo-2019